Emoji Planet | cha cha UK
Ọ bụrụ na ị na-na-akwado nke na-elekọta mmadụ media na ugboro ugboro iji izi ozi ọrụ, ị ga-maara ihe Emoji bụ ihe niile banyere. Na e nwere a nkiri dabeere na a fun jupụtara isiokwu kwa. Emoji Planet na-a oghere egwuregwu dabeere na-akpa ọchị na-agụ akụkọ na-eji dị ka akụkụ nke ozi ọrụ. Nke a n'elu ekwentị cha cha egwuregwu nwere a oghere na ise e nyere ahịrị na isii ogidi ma e nweghị mgbe spinning esi anwụde. Kama, nnọchianya na-meriri na ise nke a ụdị egwuregwu na ị na-anọchi akara oge ọ bụla ị na-eme a mmeri. Nke a na-arụ ọrụ dị ka ihe ọzọ ohere maka gị iji merie kwa. Iji na-edebe gị nzo na egwuregwu a, e nwere mkpụrụ ego ụkpụrụ malite 20p na ị nwere ike ịga ruo £ 200 kwa uzo.
Banyere Mmepụta nke Emoji Planet
Nke a fun jupụtara na ụtọ n'elu ekwentị cha cha oghere e mepụtara site NetEnt. Otu n'ime ndị kasị ibu suppliers nke cha cha egwuregwu na online obodo. Ha anọwo na ọrụ a maka gburugburu iri abụọ ogologo afọ ugbu a na-kere ihe karịrị otu narị egwuregwu si a dị iche iche na udi nke egwuregwu.
anya, a n'elu ekwentị cha cha game anya nnọọ na-akpa ọchị na-adọrọ. The nnọchianya nke egwuregwu a iso nke a smiley ihu na-achị ọchị n'olu dara ụda ogbugbu, a rọketi, Pizza, nsutu, acha anụnụ anụnụ na ejima obi, bọmbụ, ọbịa ihu na poop. The smiley iru-akwụ ndị kasị elu ụgwọ ọrụ nke 40x na a kacha nta nke ise nke a na ụdị na 10000x maka a zuru ụlọ, 30 akara anya. All na-emeri ihe nnọchianya na-anọchi na ọhụrụ nke na-enyere gị aka Ohere nke na-emeri. Ọ ụdị emepụta a ihe mkpalite na na pụrụ inyere gị aka imeri nnukwu. The kpakpando na akara bụ bonus nke egwuregwu a ma ise nke isi na akara na-eme ka pụrụ iche atụmatụ oke.
Star daashi: The nnọchianya nke kpakpando bụ anụ a n'elu ekwentị cha cha game. Ọ na-ekpuchi niile akara nke egwuregwu. A Nchikota ọ bụla ise nke a ụdị tinyere anụ ọhịa nwere ike inyere gị aka ime a mmeri. Anọ wilds enyere gị aka ime a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke n'ịgwa nke akara gburugburu ha.
Emoji Atụmatụ: rọketi, bọmbụ, nsusu ọnụ, obi na Pizza na-ise na akara na-akpalite bonus atụmatụ. Onye ọ bụla n'ime ndị a na akara na-achọ iri na abụọ nke a ụdị mmeri na tinye 1 gụọ nke feature. Ndị iri na abụọ ga-erukwa otu yinye Enwee Mmeri. Ndị a na-enye gị bonuses dị ka akara gbawara, 3×3 akara egwuregwu, bonus ọhịa, rọketi ehichapụkwa na multipliers.
Na ọtụtụ na-akpa ọchị animated mmetụta na uche ịfụ bonuses, a n'elu ekwentị cha cha egwuregwu na-eme na-emeri ihe dị mfe deal.